“आफ्नो श्रीमतीसँग कोरोनाको समय कस्तो अनुभव भयो ? ‘सेयर गरि २ लाख ४० हजार जित्नुहोस्” – Krazy NepaL
“आफ्नो श्रीमतीसँग कोरोनाको समय कस्तो अनुभव भयो ? ‘सेयर गरि २ लाख ४० हजार जित्नुहोस्”
November 12, 2020 289
काठमाडौं । विश्वभर अध्ययनका नाममा अनेकथरी काम हुने गर्दछन् । झण्डै एक वर्षदेखि मानिसहरुलाई कोरोना महामारीले मानसिक, भावनात्मकसहित भौतिक सुख प्राप्तिलाई लिएर धेरै नकारात्मक बनाएको छ ।
यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, बेलायतको एक कम्पनी तीन जोडीहरू’को खोजीमा छ जसले आफ्नो भौतिक सु’खी जीवनको बारेमा जान’कारी बाँड्नका साथसाथै धेरै उत्पादनहरूको परीक्षण गरेर यी उत्पादनहरूले उनीहरूको भौतिक सुखमा के फरक पारेको छ भनेर जाँच्दछन् ।
यस गतिविधि’मा भाग लिने जोडीहरूले कहि’ले र कति पटक उनीहरूलाई एकी’कृत गरिएको थियो भनेर बताउ’नुपर्नेछ । उनीहरूले भौतिक सुखका बारेमा आफ्नो अनुभव पनि साझा गर्नुपर्नेछ ।
उनीहरूको कम्पनीका उत्पादनहरुको प्रयोगपछि उनीहरुमा त्यस्तो क्षमता बढेको छ वा छैन भनेर जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यस गतिविधिमा भाग लिएर यी जोडीहरूले झण्डै २ लाख ४० हजार रूपैयाँ पुरस्कार पनि पाउँछन् ।
वास्तवमा, यस वेबसाइटले एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो जसमा धेरै आश्चर्यजनक परिणामहरू बाहिर आएका छन् । सर्वेक्षणमा १८ देखि ६० वर्ष उमेरका २००० दम्पतीहरूले भाग लिएका थिए भने ५२ प्रतिशत दम्पतीहरू विश्वास गर्छन् कि कोरोना भाइरस महामारीको कारण उनीहरूको भौतिक सुख नकरात्मक रूपमा प्रभावित भएको छ ।
यस वेबसाइट’को एक विज्ञ’प्तिमा लेखिए’को थियो कि कोरोना’का कारण ती दम्पतीको भौति’क सुख जीवन प्रभावित भएको छ, त्यसैले हामी उनीहरूको लागि केही रोचक गर्न चाहन्छौं । गार्डन्सको बढ्दो चलनलाई हेरेर हामी तीन वटा त्यस्तै जोडीहरू खोज्दैछौं जसले हाम्रो लागि उत्तम फ’लफूल, तरका’रीहरू, बोटबिरुवा’हरू र जडिबुटीहरू’को सूची तयार पार्न सक्दछन् जसले उनीहरू’को भौतिक सुखको जीवनलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुर्याएको छ ।
यस वेबसाइट’का अनुसा’र प्रत्येक जोडी’लाई दुई महिनाको सुरूमा उत्पादन प्याके’ज दिइनेछ । यसमा जुन उत्पादन’हरू हुन्छन्, उनीहरूले जाँच गर्नुपर्नेछ । यस बाहेक, उपकरणहरू, दिशानिर्देशहरू र व्यंजनहरू पनि यी व्यक्तिहरूसँग साझा गरिनेछ ।
सबै जोडीहरू आफ्नो सुवि’धा अनु’सार प्रत्येक उ’त्पादन को उपयोग ‘गर्न को लागि अपेक्षित हु’नेछन् । प्रयोगपछि त्यसको प्रभाव’हरुको बारेमा एक विस्तृत समीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । यो समीक्षा शक्ति बढाउने र भौतिक सुख सम्भाव्यतामा असर जस्ता विषयहरूमा सम्बन्धित हुनुपर्छ ।
दुई महिना अवधि’को अन्त्य पछि, प्रत्ये’क जो’डीले आ’फ्नो समीक्षा पेश ग’र्नुपर्नेछ । समी’क्षापछि उनीहरूलाई यो गतिविधि’मा भाग लिएको भन्दै कम्पनीको तर्फबाट झण्डै २ लाख ४० हजार” रूपैयाँ दिइनेछ । यी जोडी’हरुको उमेर २५ देखि ६० बर्ष बीच हुनु’पर्दछ । यद्य’पि यो स्थिति सबै समुहका मानिसहरुको लागि हुने जनाइएको छ ।’
Prev“कुण्डलीमा ग्रह नक्षत्रको सिधा प्रभावको कारणले किन यी ४ राशि भएकाहरु एकान्त मन पाराउछ ?”
Next“पार्टी विभाजन रोक्ने गरी निर्णय लिनुपर्छ भन्ने नेकपा सचिवालयका सदस्यले निष्कर्ष निकाले “
“फेरि पोखरा बाट एक प्रे’म जोडि’को हे’र्नै नसकिने भिडि’यो सार्वजनिक (हेर्नुहोस भिडियो)”
वास्तुशास्त्र अनुसार सुख,शान्ति,धन प्राप्तिको लागी घरमा के के कुराको आबस्यक पर्छ हेर्नुस
जान्नुहोस् ,कुन-कुन राशिबीच विवाह हुँदा अति शुभ, कुन-कुन राशीबीच अशुभ !